I-China Charmlite 3D Cartoon Animal Cups ene-Handle, abakhiqizi nabathengisi be-Ice Ice Cream Mug I-Charmlite
Ama-Charmlite 3D Cartoon Animal Cups nge-Handle, i-Cute Ice Cream Mug Ukudla Ibanga
Model No: I-CL-IM001
Lo mthamo wezinkomishi zezilwane zekhathuni u-300ml. Inkomishi yangaphakathi yenziwe ngezinto ze-PP, ingxenye yezilwane yenziwa nge-vinyl (PVC). Izipho ezinhle izingane. Futhi yamukelwa kakhulu kumapaki wezingqimba ze-ayisikhilimu. Amakhasimende angenza imidwebo yabo ye-3D yangokwezifiso. Njengokwenza i-mugs yezithombe. Futhi amaklayenti adinga nje ukukhokha ukusetjenziswa kwezithombe. Hhayi izinkomishi. Isikhathi samathuluzi siseduze kwezinsuku ezingama-25-30.
Umkhiqizi: Emsebenzini Wepulasitiki
Izikhunta ezitholakalayo: Izilwane ezihlukene eziyi-100
Izilwane zibonakala njengempilo.
Ingabe ikhekhe lezingane zakho no-ayisikhilimu kungamaphepha ajwayelekile noma esitsheni sepulasitiki? Kungani ungazami le nkomishi yezilwane ekhathuni enhle ye-3D? Ukudla kuzobukeka kukuhle ngokwengeziwe ngalesi siqukathi! Izingane zingakhetha izilwane ezizithandayo, ezinjengedada eliphuzi, ingwenya, inganekwane eluhlaza okwesibhakabhaka, inyoni ethukuthele, njll.
Okubaluleke kakhulu, ingaphakathi laleziqukathi lenziwa nge-PP, okuyisigaba sokudla ne-BPA yamahhala. Kuphephile izingane. Izingane ungazisebenzisa ngaphandle kwezinkathazo.
Singenza imibala eyenziwe ngokwezifiso zendebe yangaphakathi, eluhlaza okwesibhakabhaka, grey, obomvu, ophuzi, omhlophe njengentando yakho. Vele usitshele umbala wakho we-pantone.
Ingaphandle lenziwa nge-vinyl (PVC), nayo engadlula ekuhlolweni okujwayelekile kweYurophu.
Ama-Pls azizwa ekhululekile ukuxhumana nathi uma udinga ukubona izithombe eziningi zokubumba ezikhona. Noma uma ungathanda ukwenza owakho umklamo.
Uma uzenzela owakho umklamo, sizothumela inombolo eningiliziwe yezinombolo zendebe engaphakathi. Ngemuva kwalokho ungaqamba isithombe sakho kwifayela le-3D. Ngemuva kwalokho sizokwenza isampula langempela le-3D lokuvunywa kwakho. Ngemuva kwalokho, sizohamba sivule isikhunta sangempela. Uma konke kuphelele, sizodlulela ekukhiqizweni ngobuningi. Isikhathi samathuluzi siseduze kwezinsuku ezingama-30 ngemuva kokuvunywa komklamo.
Esedlule: I-Charmlite New Insured Tumbler yeZiphuzo Ezishisayo Nezibandayo 16 Ounce - BPA Mahhala
Olandelayo: I-Charmlite Recyclable Plastic Mason I-Cocktail Cup, i-Shatterproof ne-BPA-free isiphuzo iJar
I-Bamboo Faber Ice Cream Mug
I-Mug Ice Cream